Si fudud Import / Dhoofinta Xiriirada si / ka Phone ee Android
> Resource > Android > Si fudud Import / Dhoofinta Xiriirada iyo ka Android Phones
God aad telefoon Android jir, waayo, mid cusub, sida Note Samsung 3, oo aad rabto in lagu wareejiyo xiriir u dhaxeeya? Eeg siyaalo wax dhoofin xiriirada ka Android inay computer ama Outlook, Gmail u gurmad, haddii aad si qalad ah iyaga waayi karaa? Raadi jid ay dajiyaan xiriirada ka file CSV ama file VCF in telefoonka aad Android? Ma ahan heshiis weyn. In this article, Waxaan jeclaan lahaa inaan idin ​​tusin xal qaar ka mid ah inay ka sameeyaan. . Iska akhriso on Bonus: Ma waxaad sidoo kale raadinaya ah si fudud oo ammaan ah habka si aad u hesho xogta wareejiyo computer, taas infographic waxa uu kuu sheegi.
Qeybta 1: 2 hababka ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay computer
Qeybta 2: 3 hababka ay u gudbiyaan xiriirada ka computer si ay Android
Qeybta 3: Sida loo wareejiyo xiriirada ka Android inay Android
Buur Android sida flash ah
Sida loo dhoofin VCF ka Android inay PC MobileGo
Sidee si ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay computer
Dhulku lacag la'aan ah;
Sahlo si ay u gudbiyaan xiriirada ee xisaab, sida Google, Facebook, Twitter, iwm;
Copy xiriirada Android in Outlook, Windows Cinwaanka Book, Windows Live Mail;
U ogolow in eegista dhoofin xiriirada;
Too waqti lumis,
Waa in cable USB ah;
Habka 1. Sida loo eegista nuqul ka xiriirada Android inay computer la MobileGo
* Bedelka oo dhan ama soo xulay xiriirada ka Android inay computer, iyo qeybsanaan ku xigeenka
* nidaameed Android xiriir la Outlook, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Book
* midowdo xiriirada nuqul ka ah maamul fudud
* info Edit xiriir dhamaystiran, oo ay ku jirto cinwaanka Email, lambarka telefoonka, magacaaga shirkadda , cinwaanka guriga, iwm
* Ka sokow xiriirada, waxaa ku wareejinaya SMS, barnaamijyadooda, music, video, sawiro iyo waraaqaha.
Tag version Mac - Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac)
Oo ay taageerayaan ayaa Android OS, telefoonada iyo kiniiniyada
Android Laga soo bilaabo Android 2.0 in Android 5.0
Taageerayaan telefoonada Android & kiniiniyada
Soo-saareyaasha Samsung, HTC, LG, Motorola, Sony, Google, ZTE, LG, Huawei, Acer, Asus, Dell, Baro wax badan oo >>
Tutorial soo socda uu kuu sheegayaa sida loo sameeyo xiriir Android kala iibsiga la vesion Windows ah. Dadka isticmaala Mac, sidoo kale waxaad kala socon kartaa. Si kastaba ha ahaatee, hal baan idin waa inuu cadeeyaa in version Mac ma ha uusan aad u hagaagsan Outlook la phone Android ama xisaab.
Tallaabada 1. Orod barnaamijka iyo xirmaan telefoonka aad Android
Si aan ku bilaabo, dejisan iyo rakibi MobileGo aad kombuutarka. Marka la dhammeeyo ka rakibo, waa in aad u ordo. Markaas raac saaxir ah Connect in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android aad PC via cable USB ama Wi-Fi. Barnaamijkan wuxuu si toos ah lagu ogaan doonaa qalab aad oo uu soo bandhigo in uu furmo guriga.
Fiiro gaar ah: Sii MobileGo tallaalka ah wirelessly? Waxaad u baahan tahay inaad soo dajiyo MobileGo app qasban tahay inay leedahay qalabka Android aad.
Tallaabada 2. xiriirada Nuqul ka Android inay computer, Outlook, iwm
Tag galeeysid ka tegey oo guji Xiriirada . Dhammaan xiriirada la soo bandhigi doonaa guddi saxda ah. Xulay xiriirrada aad ku socoto inay u dhoofiyaan, oo guji dhoofinta > dhoofinta dhammaan dadka ay khuseyso in computer ama dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer .
Labaad menu hoos-hoos ayaa ku soo beegmay, oo aad ku helayso shan doorasho. Dooro si file vCard si loo badbaadiyo xiriirrada dhoofiyo sida vCard files kombiyuutarka. Intaa waxaa dheer, waxa kale oo aad dhoofin karo xiriirada in Outlook, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail.
Habka 2. Sidee si ay u gudbiyaan file vCard ka Android inay computer for free
Tallaabada 1. telefoonka aad Android, u tag Xiriirada app.
Tallaabada 2. Tubada menu iyo dooran Import / Dhoofinta > dhoofinta in Kaydinta USB . Markaas, xiriirrada dhammu u wada badbaadi doonaan, sida VCF ah in kaarka SD Android.
Tallaabada 3. Isku telefoonka aad Android inay computer la cable USB ah.
Tallaabada 4. Tag si aad u hesho folder card SD telefoonka Android oo nuqul ka VCF laga dhoofiyey in computer.
Sida loo soo dhoofsadaan Excel / VCF in Android Google hagaagsan
Sida loo hagaagsan Google xiriir si Android MobileGo
VCF, Outlook, iwm Sida loo wareejiyo Android
(Soo Celinta kaga imaanayo file)
Xiriirada nidaameed ee Gmail, Facebook, Twitter, iyo in ka badan si ay Android;
Import VCF badan si ay Android;
Xiriirada Transfer ka Outlook, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Book waa in;
Copy files more effortlessly;
Qaado waqti badan;
cable USB ah waa waajib ah;
Ma u baahan tahay xisaab Google;
Habka 1. Sida loo soo dhoofsadaan Outlook, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo VCF in Android
Si aad u dajiyaan xiriirada ka xisaab qaar ka mid ah, sida Outlook Express, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Windows Live Mail, Wondershare MobileGo yimaado anfacaya. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, waxa ay taasi sida ugu fudud ee qasabno yar oo sahlan.
Fiiro gaar ah: Si aad u ogaatid info badan oo ku saabsan Wondershare MobileGo, fadlan riix halkan .
Si aan ku bilaabo, rakibi oo ay maamulaan MobileGo Wondershare ee kombiyuutarka. Connect telefoonka aad Android inay computer la cable USB ah ama ka weyn WiFi. Ka dib markii la aqoonsan yahay, telefoonka aad Android la soo bandhigi doonaa furmo suuqa hoose, iyadoo files ay kala saaraa galeeysid bidix.
Fiiro gaar ah: Ku rakib app MobileGo ku saabsan qalab Android marka aad rabto inaad u guurto xiriirada si wirelessly Android.
Tallaabada 2. Transfer xiriirada ka Outlook, computer ama kuwa kale si ay Android
On column ka tegey, guji Xiriirada . In guddi saxda ah, guji Import > xiriir Import ka computer . : Waxaad ka heli shan fursadaha ka file vCard , ka Outlook dhoofinta , ka Outlook 2003/2007/2010/2013 , ka Windows Live Mail oo ka Windows Cinwaanka Book . Dooro akoonka aad meesha xiriirada aad ku kaydsan yihiin iyo dajiyaan xiriir ah.
Habka 2. Sida loo soo dhoofsadaan xiriirada ka Excel / VCF in Android la cable USB
Haddii aad rabto in lagu wareejiyo xiriirada ka Excel in Android, waa inaad raacdaa tutorial oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay VCF ku on your computer, waxaad ka boodi kartaa 4 tallaabooyin hore. Read talaabada 5 iyo ka dib.
Tallaabada 1. Land aad page Gmail iyo calaamad in aad xisaabta iyo password.
Tallaabada 2. column bidix, guji Gmail si ay u muujiyaan in ay hoos u soo dejiyey liiska, ka dibna riix Xiriirada .
Tallaabada 3. Riix More iyo dooran Import ... . Dooro Excel in xiriirada aad la badbaadiyey oo u dhoofsadaan.
Tallaabada 4. Hadda, dhammaan dadka ay khuseyso ee Excel ayaa lagu uploaded in aad xisaabta Google. Haddii ay jiraan tahay tus ka badan, guji More > Hel & midowdo tus ka ... . Markaas, Google wuxuu bilaabaa inuu ku milmaan xiriirada nuqul ee group in.
Tallaabada 5. Tag More guji dhoofinta ... . In wada hadal pop-up ah, ay doortaan in ay xiriir la dhoofiyo sida file vCard. Markaas, guji dhoofinta oo u badbaadin doonaa in kombiyuutarka.
Tallaabada 6. Buur telefoonka Android sida USB flash kombiyuutarka la cable USB ah. Raadi iyo kala folder card SD.
Tallaabada 7. Dul folder meesha VCF la dhoofiyo waxaa la badbaadiyey. Copy iyo paste in aad kaarka SD phone Android.
Tallaabada 8. aad Android phone, tuubada Xiriirada app. By dhejinta waaraadka menu, waxaad ka heli fursadaha qaar ka mid ah. Tubada Import / dhoofinta .
Tallaabada 9. Tubada Import ka Kaydinta USB ama Import ka card SD . Phone Your Android lagu ogaan doonaa VCF ka cadni ee soo dejinta inay app xiriir ah.
Habka 3. Sida loo hagaagsan Google xiriir la Android
Maxaa dhacaya haddii muuqaalada phone Android aad u hagaagsan Google? Waa hagaag, waxaad directyly karo xiriirada Google hagaagsan iyo xitaa kalandar si telefoonka aad Android. Hoos waxaa ku tutorial ah.
Tallaabada 1. Tag Dejinta telefoonka aad Android, iyo dooran Account & hagaagsan .
Tallaabada 2. Raadi account Google iyo diiwaan gelin doonaan. Markaas, sax nidaameed Xiriirada . Sax nidaameed Kalandarada haddii aad rabto.
Tallaabada 3. Markaas, ka jaftaa nidaameed Hadda si hagaagsan oo dhan xiriirada Google inay telefoonka aad Android.
Fiiro gaar ah: dhammaan taleefanada Android Aan kuu ogolaanaya in aad u hagaagsan xiriirada Google.
* Bedelka oo dhan xiriirada ka mid Android inay kale ee 1 click
* nuqul xiriir Full la magaca shirkadda, jagada shaqada, cinwaanka email, cinwaanka guriga iyo ka badan info
* Ma xiriir oo kaliya, waxa kale oo guuro barnaamijyadooda, SMS, music, sawiro, video iyo call Guda
* 100% la jaan qaada 2,000 telefoonada, oo ay ku jiraan Samsung, HTC, Sony, Motorola, LG, iwm
* Halista-free iyo wax khasaare ah oo tayo leh
* Android ka sokow, waxaa sidoo kale la jaan qaada macruufka & Symbian
Hubi lagu daydo iyo OS Android taageeray
Android Laga soo bilaabo Android 2.1 in Android 5.0
Soo-saareyaasha Samsung, LG, HTC, Motorola, Google, Sony, ZTE, Huawei, Acer, Baro wax badan oo >>
Tallaabada 1. Isku labada telefoonada Android inay kombiyuutarka
Ka qaada fiilooyinka USB iyo xirmaan labada telefoonada Android inay kombiyuutarka. Burcad Wondershare MobileTrans ah oo si deg deg ah lagu ogaan doonaa labada telefoonada Android. Markaas, sida shaashada soo socda ayaa muujineysa, labada telefoonada Android tusi doonaa in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. xiriirada Nuqul ka Android inay Android
Si aad nuqul xiriir oo kaliya, waxaad u baahan tahay inaad uncheck faylasha kale. Markaas, bilowdo xiriir kala iibsiga Android adigoo gujinaya Start Copy . Marka iibsiga xiriir la dhammeeyo, dhammaan dadka ay khuseyso noqon doonaa ku saabsan telefoonka cusub Android.
Download Wondershare MobileTrans ay u guuraan xiriirada ka Android inay Android aad u gaar ah!